Izixhobo zePeni ezifihliweyo ze-Illustrator CC
NguJennifer Smith, uChristopher Smith
Gcina uphawu lwePen lwezixhobo kwiPaneli yezixhobo ze-Illustrator ukufikelela kwizixhobo ezongezelelweyo: Yongeza iAnchor Point, Cima iAnchor Point, kwaye Guqula izixhobo zeAnchor Point. Unokwenza indawo ekhoneni ngokusebenzisa indlela emfutshane, ngokucinezela Alt (Windows) okanye Option (Mac) iqhosha lokufumana isixhobo sokuguqula iAnchor Point. Unokuziva ukhululekile ukutshintshela kweso sixhobo xa ufuna ukuguqula inqaku, kodwa izixhobo zokutshintsha zinokuchitha ixesha.
Izixhobo eziFihliweyo zePeni
Yongeza iAnchor Point
Cima iAnchor Point
Guqula iAnchor Point
Nangona ungasebenzisa isixhobo esifihliweyo ukucima kunye nokudibanisa amanqaku e-anchor, i-Illustrator ngokuzenzekelayo iyakwenza oku ngokungagqibekanga xa usebenzisa isixhobo sePen. Xa uhambisa isikhombisi ngaphezulu kwenqaku leankile usebenzisa isixhobo sePen, kuya kuvela i icon yokuthabatha. Ukucima inqaku leankile, cofa nje ngokulula. Kwangokunjalo, xa uhambisa isikhombisi kwinxalenye yendlela engenaziindawo ze-anchor, i icon yokudibanisa iyavela. Cofa nje ukongeza inqaku le-anchor.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa izixhobo ezinikezelwe ukongeza nokucima amanqaku e-anchor, khetha Hlela → Ukukhetha → Ngokubanzi (iiWindows) okanye i-Illustrator → Ukukhetha → Ngokubanzi (Mac); kwibhokisi yencoko yencoko yababini ebonakala, khetha i-Disable Auto Add / Deleting checkbox. Ke xa ufuna ukongeza okanye ukucima indawo yeankile, khetha isixhobo esifanelekileyo kwaye ucofe indlela.
Ukongeza izixhobo ukunceda ukwenza iindlela
Ezinye iinguqulelo zezixhobo zePen ziyafumaneka kwiPaneli yokuLawula kwi-Illustrator CC. Ungazisebenzisela ukusetyenziswa kwezixhobo ezininzi zePen, kodwa ukusebenzisa iindlela ezimfutshane zokutshintsha isixhobo sePen kukhetho lwayo olwahlukeneyo kusenokwenzeka ukuba lukhawuleza. Ukuba uyamelana nokudibanisa iminwe yakho ngelixa uzama ukwenza umendo, kuya kufuneka uzixabise ezi zixhobo.
Ukubona izixhobo zepaneli yokuLawula, khetha isixhobo sePen kwaye uqalise ukwenza umendo. Qaphela ukuba Iphaneli yokulawula inoluhlu lwamaqhosha akhoyo.
Sebenzisa isixhobo se-Eraser
Ukuba awusifumanisisi sixhobo se-Eraser, uya kuzibuza ukuba uhambe njani ngaphandle kwaso! Usebenzisa isixhobo se-Eraser, ungasusa ngokukhawuleza indawo yobugcisa ngokulula njengoko ucima iipikseli kwiFotohop ngokubetha imouse yakho kuyo nayiphi na imilo okanye useto lweemilo.
Iindlela ezintsha zenziwe ngokuzenzekelayo ecaleni komda wokucinywa, kwanokugcina ukutyibilika kwawo.
Isixhobo se-Eraser sisusa amacandelo endlela.
Ngokucofa kabini isixhobo se-Eraser, ungachaza ubukhulu, i-engile, kunye nokujikeleza kwerabha yakho. Ukuba usebenzisa icwecwe lokuzoba, unokusetha iiparameter zokunxibelelana kwethebhulethi yeWacom, ezinje ngoXinzelelo kunye nokuThoba.
Cofa kabini isixhobo se-Eraser ukuseta izixhobo ezahlukeneyo.
Ukuba ufuna ukucima ngaphezu kwento enye ekhethiweyo, sebenzisa imo eyahlukileyo ukwahlulahlula ngokwamaqela izinto zokuhlela. Khumbula ukuba ukuze ungene kule ndlela, cofa kabini iqela lezinto. Ungasebenzisa i-eraser kuzo zonke izinto ezikwelo qela ngaxeshanye ngaphandle kokuphazamisa uyilo lwakho lonke.
igama eliqhelekileyo le-valtrex
yintoni ipilisi yeXanax
Ixabiso le-elasticity ye-equation equation